Shirkadda Telesom Oo Koob Kubbadda Cagta ah u qabatay Kooxo Shirkadda ka tirsan – WARSOOR
Shirkadda Telesom Oo Koob Kubbadda Cagta ah u qabatay Kooxo Shirkadda ka tirsan
Hargeysa – (WARSOOR) – ayaa waxa ka qabsoomay garoonka Power League xaflad kooban oo lagu daah furay Koob loogu tala galay kooxaha kala duwan ee shaqaala waynaha Shirkadda Isgaadhsiinta casriga ah ee Telesom. Koobkan oo loo bixiyay “Koobka Kubbadda Cagta Ee Kobcinta iyo Isdhex-galka Shaqaalaha Shirkadda Telesom” ayaa waxa ka qayb geli doona lix kooxood oo u kala safanaya qaybaha guud ee ay ka kooban tahay shirkadda Telesom Group.
Kooxaas ayaa kala ah Kooxda ku ciyaaraysa magaca Telesom Comp. Kooxda ku ciyaaraysa magaca Dara-Salam Bank. Kooxda ku ciyaaraysa magaca Zaad Service. Kooxda ku ciyaaraysa magaca Telesom Electric ee TEC. Kooxda ku ciyaaraysa magaca Somgas iyo Kooxda ku ciyaaraysa magaca xawaaladda Taaj.
Hay’adda Shaqaalaha Dawladda Oo Kulan la Yeelatay Agaasime Waaxeedyadda Maamula Maaliyada Iyo Cudduda Shaqaalaha Ee Wasaaraddaha Iyo Hay’addaha
Somaliland, Ethiopia Agree to Strengthen Cooperation